Kusvirwa Nyoro NemuDembare KuBhora................
Ndakazonzwa kudziya kumagaro kwangu pandakatarisa ndakaona mboro yatonwa mubeche This day yaive iri sunday . kwaive ne bhora re Dembare ne Highlanders.So ndandisina zvekuita ndobva ndatoti rega ndiende kubhora I bathed ndobva ndapfeka jezi rangu re Dembare neka mini skirt kangu kekuti ndikakotama matako angu ese anoenda panze.
Ndakakwira kombi ndakananga kuRufaro.Vanhu vaingonditarisa coz ka skirt kangu ndakagara munhu anenge achiona pent yangu. Musi uyu ndandakapfeka G-string so matinji ese anga aripanze coz kabhurugwa kakanyura mumukosho nepaka line kebeche rangu. Vanhu vaitaura mukombi but ndandisina kana basa nazvo.Ndakasvika kuRufaro ndobva ndapinda mu ground. Ndakaenda kunojoiner vaiimba vaya vachiridza ngoma.Semunhu anga amborova bronco ndandabatwa.Chero ndichienda kubasa ndinototanga ndarova sip ye bronco.
Takatanga kuimba tichi supporter Dembare. Ndaiti ndikatamba sele magaro angu aisara pachena.Ndaizongonzwa ndichirohwa twumbama nerimwe boys raikuza. As a lady plus ndandisina basa nevanhu coz ndiri gunners .So as a soilder ndakadzidziswa kushinga. Pane vamwe Jah man vandakanga ndatamba navo sele ndikanzwa mboro yavo ichi gwinha gwinha. So jah man ava vakatanga kungo tambira tambira kumashure kwangu.Dzadzakapfeka ziGown re blue re Dembare. Aiti achitamba ondimbundira nekumashure takafuga zigown riya. I think this guy was cool and nice. So ndaka ramba zvangu ndichitamba na Jah man vaya.Ndichi fongora kutamba sele ivo vobva vandifugidza ne gown ravo varikumashure kwangu vachi koira koira.
Vanhu vaiona vaingoti haaiwawo ma dance emubhora but ndakazonzwa kudziya kumagaro kwangu pandakatarisa ndakaona mboro yatonwa mubeche mangu. Ndakaona kuti Jah man ava vakange vakutondisvira.Ndakaramba ndakafongora ndichitamba sele Jah man vachikoira koira. Hey mboro ya Jah ava yairi refu ndaiinzwa ichibaya baya kuchibereko.Ndakabva ndamira Jah vaya kwakuvhomora zimboro ravo. Ndaitya kuti ndikaramba mboro iyi irimo ndaizoita go crazy zvikazobatwa kuti ndirikutosvirwa. Ndakabva pana Jah vaya ndobva ndaenda kune ngoma kwakumbotamba ndiriko. After some minutes ndakadzokera kuna Jah vaya kwakutanga kutamba sele ndichiitira kuti Jah vaise zimboro ravo futi. Akabva ariti shweee futi.
Ndobva ndanyatso tanga kuchukucha chiuno Jah vachikoirira.Mboro yekubira bira inonaka. Airova ngoma akabva airova zvai enderana nekusvirana kwatakanga takuita .Ndakazoramba ndakafongora mboro irimo ndichichukucha chiuno. Vanhu vakatanga kuombera maoko vachifarira matambire ataiita vasingazive kuti ndirikunakirwa nemboro yayakamwa mubeche mangu. Mboro payakange yakunaka ndakunzwa kuda kutunda Dembare yakabva yagohwesa ndobva ndavhomora mboro kwaku jamba jamba tichifarira goal!!!!!
Kusvirwa Nyoro NemuDembare KuBhora appeared first on Vanodazvinhu.com
Updated: March 6, 2021 — 10:29 pm